छालामा मासुका डल्ला छन् ? यसरी हटाउनुहोस् « Canada Nepal
छालामा मासुका डल्ला छन् ? यसरी हटाउनुहोस्
कतिपय मानिसको शरीरमा मासुका स–साना डल्ला आउँछन् । कसैकोमा यो एउटा मात्रै हुनसक्छ भने कसैकोमा सय वटासम्म डल्ला हुन सक्छ । यी डल्ला झट्ट हेर्दा डरलाग्दा देखिन्छन् । तर यिनले खासै हानि गर्दैनन् । तथापि सौन्दर्यलाई भने यिनीहरूले बिगार्छन् ।
धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, यस्ता डल्ला घरै बसेर सजिलै हटाउन सकिन्छ । यस्ता डल्ला हटाउन चुक अमिलो उपयोगी हुन्छ । यस्तै एप्पल साइडर भिनेगर (स्याउबाट बनेको चुक अमिलो)ले पनि यि डल्ल सजिलै हटाउन सक्छ ।
यसका लागि शुरुमा कपासलाई चुक अमिलोमा डुबाउने त्यसपछि यसलाई छालाका डल्लामा दैनिक २/३ पटक घोट्ने । यो प्रक्रिया दिनदिनै दोहोर्याउँदा डल्लाको रंग परिवर्तन हुन्छ र आफैं झरेर जान्छ । यसो हुन लगभग एक हप्ता वा त्यो भन्दा अलिक बढी पनि लाग्न सक्छ । त्यसैले धैर्य गर्नु जरूरी हुन्छ ।
ध्यान रहोस्, छालाका डल्ला पलाउनु सामान्य कुरा हो । यी हानिरहित डल्ला छालाबाट झुण्डिएका साना र नरम बेलूनजस्ता देखिन्छन् । पुरुष र महिला दुवैमा छालाको डल्लो हुन सक्छ । प्रायः मोटा मान्छेमा छालाको डल्ला निस्कन्छन् । कुनै कुनै डल्ला आफैं झर्छन् भने कुनै चाहिँ रहिरहन्छन् । यिनलाई मेडिकल भाषामा एक्रोकोर्डन भनिन्छ ।
प्रकाशित मिति : बैशाख २३, २०७९ शुक्रबार १० : ३० बजे